Ọdịnihu ahia maka oke ahịa! Full March 2021 Mụta 2 Trade Guide
Mụọ 2 Ahịa 2021 Ntuziaka Na Fzụ ahịa Ọdịnihu!
Ọdịnihu ahịa na-enye gị ohere ịkọwapụta uru 'ọdịnihu' nke akụ dị ka ọla edo, mmanụ, gas, ebuka, indices, ma ọ bụ cryptocurrencies - na-enweghị ibido iburu nke ya Ebumnuche dị oke mkpa bụ ịkọ ma ị chere na ego nke ihe onwunwe ahụ ga-adị elu ma ọ bụ dị ala karịa ọnụahịa iku nke ahịa.
N'adịghị ka nhọrọ, onye nwe nkwekọrịta n'ọdịnihu nwere ibu ọrụ ịzụta akụ dị n'okpuru ya ma ọ gwụ. Nke a bụ ọnwa atọ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị mkpụmkpụ ma ọ bụ karịa dabere na ahịa a kapịrị ọnụ. Agbanyeghị, ịnwere ike iwepu nkwekọrịta gị n'ọdịnihu tupu ụbọchị mmebi, nke ga - enyere gị aka ị nweta uru na uru gị.
In our Mụta 2 Trade 2021 Guide On Futures Trading, anyị na-akọwa ins na outs nke otu ihe ahụ si arụ ọrụ. Anyị na-enyocha ihe ndị ọzọ dị na ntanetị ntanetị maka ịntanetị maka ndị na-azụ ahịa ahịa kwa ụbọchị.
Rịba ama: A na-echekwa nkwekọrịta azụmaahịa ọdịnala maka oghere ebumnuche - ọ bụghị opekata mpe n'ihi na nha nha kachakarị bụ ọnụọgụ 6 ma ọ bụ 7. Dịka, ị ga-atụle ọdịnihu CFD dị ka onye na-ere ahịa ahịa.
Gịnị bụ Ọdịnihu?
Na nkenke, ọdịnihu bụ ihe nrụpụta ego nwere ọkaibe nke na-enye gị ohere ịkọwa maka uru ọdịnihu ga-aba. Nke a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla sitere na ndeksi n'ahịa dị ka S&P 500 ma ọ bụ FTSE 100, na ngwaahịa dị ka ọka wit, mmanụ, gas, ma ọ bụ gold. Ọdịnihu ahịa nwere ebumnuche abụọ akọwapụtara.
Nke mbu, enwere ike iji ha dika ihe eji eme ihe iji rite uru site na odi n'iru nke ego. Nke a na-arụ ọrụ otu ọrụ ngwaahịa ọ bụla na ahịa azụmaahịa. N'aka nke ọzọ, ndị nrụpụta buru ibu, ndị ọrụ ugbo, ma ọ bụ ndị na-ekesa ihe nwekwara ike iji ọdịnihu kpọchie ọnụahịa nke akụ ha metụtara.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa mmanụ dị ugbu a na-adịghị ala, ụlọ ọrụ ụgbọelu nwere ike ikpebi ịzụrụ nkwekọrịta ọdịnihu iji gbaa ogige megide mmụba na mberede. N'ihe banyere nkọwa ndị a, nkwekọrịta n'ọdịnihu ga-enwe ụbọchị mmebi - nke ọkara ọnwa atọ.
A ga-ekpebi uru gị na ọghọm gị site na ọnụ ahịa ahịa nke ihe ahụ mgbe nkwekọrịta nkwekọrịta n'ọdịnihu gwụrụ. N’aka ozo, ikwesiri ime ka ihe di iche di n’etiti izu ahia na iku ya karie onu ogugu nke nkwekọrịta gi. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ị nwere ike kpebie ịzụ ahịa nkwekọrịta gị n'ọdịnihu tupu ọ gwụ, na ire ere ahụ dabere na uru ahịa dị ugbu a nke akụ ahụ.
Uru na ọghọm nke azụmaahịa Ọdịnihu
Enwere ike ịzụta ma resị azụmaahịa ọdịnihu ihu na klaasị ọ bụla bara uru
Na-enye gị ohere ịkọ nkọ ma ị chere na akụ ahụ ga-arị elu ma ọ bụ ala na uru n'ọdịnihu
Often na-achọkarị itinye naanị obere akụkụ nke uru ahịa zuru oke dị ka nkwụnye ego
Can nwere ike ịpụ ọnọdụ gị tupu oge agwụ
Ọ bara ezigbo uru na mgbochi megide mmụba na mberede ma ọ bụ ibelata ihe onwunwe ị nwere mmasị na ya
Ọdịnihu na-adabara naanị maka ndị ahịa ụlọ ọrụ
Ha dị nnọọ nkọ karịa akụ ọdịnala
I nwere ike idafu ego
Ghọta Futures Futures - The Basics
Ọsọ ahịa n'ọdịnihu nwere ike ịbụ ebe agha dị mgbagwoju anya maka ndị ọchụnta ego ọhụụ, yabụ ọ dị mkpa ka anyị kwatuo isi ihe na nkọwa. Tupu anyị emee, ka anyị lelee ihe atụ dị oke elu iji kpochapụ alụlụụ.
Ihe Nlereanya nke Ọdịnihu
Ka anyị were ya na ị chere na mmanụ dị ala na $ 20 kwa gbọmgbọm. I kwenyere na n'ime izu ma ọ bụ ọnwa ndị na-abịanụ, ọnụahịa ahụ ga-arị elu karịa $ 30. N'ihi ya, ị kpebiri ịzụta ụfọdụ nkwekọrịta n'ọdịnihu.
Ọdịnihu nkwekọrịta nwere mmebi nke ọnwa atọ
Oge mmebi nke nkwekọrịta ọ bụla dị $ 27
I kpebiri ịzụta 100 nkwekọrịta
Mgbe nkwekọrịta ọdịnihu ga-agwụ n'ime ọnwa atọ, ọnụahịa mmanụ bụ $ 40 kwa gbọmgbọm
Nke a na - arụ ọrụ na $ 13 kwa gbọmgbọm elu karịa ụgwọ nkwekọrịta nke $ 27, yabụ na ị nwetara uru
Na mkpokọta, ị nwere nkwekọrịta 100 yabụ ị na-eme ngụkọta nke $ 1,300 na azụmaahịa a n'ọdịnihu (100 x $ 13)
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, uru anyị dabere na ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa nkwekọrịta ($ 27) na ọnụahịa ahịa n'ezie mgbe nkwekọrịta ahụ gwụrụ ($ 40). Ọ bụrụ na ahia ahụ gara n'ụzọ ọzọ - nke pụtara na ọnụahịa ahụ mechara $ 13 ala, anyị gaara eme ọnwụ nke $ 1,300 (100 x - $ 13).
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa nke nkwekọrịta ọdịnihu ga-adị mgbe niile, megide nke ọnụahịa ahịa ugbu a. Iji maa atụ, na ngalaba dị n'elu anyị kwuru na 'mmanụ' ugbu a 'ọnụahịa bụ $ 20, mana na nkwekọrịta ọnwa atọ ga-adị $ 3.
N'ụzọ dị oke mkpa, nke a bụ n'ihi na ahịa ga-ekpebi ihe ọdịnihu ọnụahịa nke akụ ga - abụ - dabere na ọtụtụ mgbanwe na ọnọdụ.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ọnụahịa nke nkwekọrịta ọnwa atọ ga-adị iche na nke nkenke ma ọ bụ karịa. N'ịnọgide n'otu ihe atụ nke mmanụ mmanụ, nkwekọrịta ọnwa 3 nwere ike ịnwe ọnụahịa njedebe nke $ 1, ebe nkwekọrịta ọnwa 22 nwere ike ịdị elu karịa na $ 12.
Ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ
Ozugbo ị nyochachara ọnụahịa mmebi nke nkwekọrịta n'ọdịnihu, ị ga-achọ ikpebi ụzọ ị chere na ahịa ga-aga. Nke a ga - abụ ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ. Na ụfọdụ ndị na-ere ahịa, a kọwara nke a dị ka ịzụta na ire iji, n'otu n'otu.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ na ọnụ ahịa nke ihe ahụ ga-adị elu karịa nke nkwekọrịta n'ọdịnihu, ị ga-aga ogologo oge. Ọ bụrụ n ’ị chere na akụnụba ahụ ga - ejedebe, ma ị ga - aga mkpirikpi. Nke a bụ otu uru kasịnụ nke azụmaahịa ọdịnihu, ebe ọdịnala ọdịnala na-enye gị ohere ịkọwa maka ọnụahịa na-arị elu.
Na ọdịnihu ọdịnala, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nkwekọrịta ga-enwe oge ngwụcha ọnwa 3. Na usoro nke kpọmkwem ,bọchị, nke a na-abụkarị Friday ikpeazụ nke ọnwa dị iche. Site na nke ahụ, ọ ga-ekwe omume ịzụta nkwekọrịta dị nkenke ma ọ bụ karịa - nke gbadara ụlọ ọrụ ego na-emepụta ahịa.
Imechi Azụ Ọdịnihu Tupu Ọgwụgwụ
Ọ bụ ezie na nkwekọrịta ọdịnihu ga-enwe ụbọchị mmebi mgbe niile, ọ dị mkpa iburu n'uche na ịchọghị ka idobe ọnọdụ ahụ maka oge ya. Na ntụle, ị nwere ike a na-emechi a futures trading ọnọdụ dị ka na mgbe ị na-ahụ kwesịrị ekwesị.
Nke a na - arụ ọrụ dịka ngwa ọrụ ego ọ bụla ọzọ - ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa ka onye na-azụ ahịa dị njikere ịzụta nkwekọrịta ọdịnihu n'aka gị. Nke a ekwesịghị ịbụ esemokwu mgbe ị na-azụ klaasị mmiri mmiri dị ka mmanụ, ọla edo, ma ọ bụ ego - ebe ọ bụ na ohere ị ga-enwe n'ọdịnihu bụ ebe obibi ruru ijeri dọla ruru nde ego kwa ụbọchị.
N'ihe banyere ọnụahịa, uru nke ahia nkwekọrịta gị n'ọdịnihu ga-adabere na ọnọdụ ahịa ugbu a.
Ka anyị were ya na ị ga-erute na nkwekọrịta gas ga-eme n'ọdịnihu nke nwere ọnwa mmebi ọnwa 3
Pricegwọ nke nkwekọrịta ahụ bụ $ 2 na MMBtu
Ọnwa abụọ n'ime nkwekọrịta ahụ, ọnụahịa nke gas nkịtị dị na $ 1.50.
I kpebiri igbachi uru gị na $ 0.50 kwa nkwekọrịta, nke ruru uru 25%
Dị ka nke dị n'elu, ị nọ 'na ego' na ọdịnihu gị na-echekwa otu ọnwa iji chebe. O doro anya, ị gaara enwe ike imeghe ọnọdụ ahụ ruo mgbe nkwekọrịta ahụ gwụrụ - ma nwee ike ịmekwu karịa. Mana, ị kpebiri ịmechi-uru gị ma weghachite nkwa nke 25%.
Ọdịnihu Ahịa Ahịa
Abịa n’ahịa ndị ị ga - azụ ma ree n’ọdịniihu n’ọdịnihu, ohere dị na ya enweghị njedebe. Yabụ, ọ bụrụ na ahịa dị, ọ ga-amarịrị na enwere ike ịzụta nkwekọrịta n'ọdịnihu. Agbanyeghị - na ka anyị na-atụlekwu nkọwa na ala, ọdịnihu ọdịnala ka edobere maka ndị na-azụ ahịa buru ibu, yabụ na ị nwere ike ịzụ ahịa CFDs kama.
Ka o sina dị, edepụtara ụfọdụ n'ime ahịa ahịa ahịa kachasị dị n'okpuru.
Ụdị: Nke a gunyere isi ahia na obere obere ahia ahia. Chee echiche banyere S & P 500, Dow Jones, FTSE 100, na Nikkei 225.
Ihe ndozi: Enwekwara ike ịzụ ahịa nkwekọrịta n'ọdịnihu na usoro ọdịnala dịka Apple, Facebook, na Disney.
Ọla siri ike: Ngwaahịa dị ka ọla edo, ọlaọcha, na ọla kọpa bụ ndị a ma ama na azụmaahịa ọdịnihu. Nke a na-enye ndị na-etinye ego ohere ịnweta akụ ga-esiri ha ike ịnweta.
Ike: Nke a gụnyere ahịa ndị bụ isi nke mmanụ manu na gas.
Ngwaahịa Ahịa Nwekwara ike ịzụta ma ree ahịa n'ọdịnihu na ngwaahịa ugbo dịka ọka, ọka, na shuga. Akụkụ a bụ ihe ama ama na ndị ọrụ ugbo na-achọ igbochi mmeghari ọnụahịa nke ọdịnihu nke akụ ha na-etinye.
Okwesiri ka m were nzipu nke aru?
Otu n’ime ajụjụ ndị ahịa ndị ọhụụ na - ajụkarị bụ nke nnyefe anụ ahụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ịzụtara nkwekọrịta otu puku na mmanụ nyịrị mmanụ ka i kwe ka nkwekọrịta gị gwụ, ị ga-ebufe n’efere ndị ahụ n’ezie?
Ọfọn, nke a dabere na otu esi ekpebi nkwekọrịta n'ọdịnihu.
N'ọtụtụ ọnọdụ, nkwekọrịta ọdịnihu ga-edozi na ego. Iji maa atụ, ka anyị were ya na inwere ọlaedo dị ogologo 1,000. Nke a pụtara na ị na-nnoo kweta ịzụta gold na a gasịrị ụbọchị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị kwe ka ọdịnihu ọlaedo gwụ, ị ga-akwụ ụgwọ ihe ga-eme n'ọdịnihu ego.
Nke a dabere na ọnụego iku nke nkwekọrịta ọdịnihu, na ọ bụghị ọnụahịa ahịa ugbu a. Isi ihe dị ebe a bụ na ọ bụ ndị na-etinye ego na-enweghị atụ na-achịkwa azụmaahịa azụmaahịa ọdịnihu. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha na-achọ naanị inweta uru site na ọdịiche dị n'etiti nkwekọrịta nkwekọrịta na ọnụahịa mmezi.
Mkpebi nke Ahụ
N'ikwu nke a, ụfọdụ nkwekọrịta ọdịnihu na-edozi na akụ na-akpata, na-abụghị ego. Nke a pụtara ìhè na Eprel 2020 mgbe ọnụahịa nke ọdịnihu mmanụ WTI gara -adịghị mma.
Ihe kpatara nke a bụ na enwere oke mmanụ na-erugharị. Dika oria ojoo coronavirus, achoro mmanu bu ihe adighi adi, nke putara na ndi jidere nkwekọrịta nke ọdịnihu enweghi ebe ha ga-edebe ya.
N'ihi ya, ndị ahịa nọ na-atụsi anya ike iwepụ nkwekọrịta mmanụ ha iji zere ibu ọrụ nke ịbuga ya n'ahịa. N'aka nke ya, nke a mere ka ọnụ ahịa ọdịnihu banye n'ókèala na-adịghị mma. N'okwu Layman, nke a pụtara na ị ga-adị ugwo iji were nnyefe nke gbọmgbọm, nke bụ ihe ọ bụla dị ka ihe a na-enwetụbeghị ụdị ya!
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ibe a elebara anya na akụkụ atụmatụ nke azụmaahịa ọdịnihu, ọ dị mkpa iburu n'uche na ihe ahụ na-eme ka ọ dị mma. N'ọtụtụ ikpe, nke a ga-abụ ezigbo onye nrụpụta nke akụ na-enweghị isi nke na-achọ ichebe onwe ha pụọ ​​na ọdịda na mberede.
A sị ka e kwuwe, akụ dị ka mmanụ, ọka wit, ọka, ọka, na shuga na-achịkwa ọkọnọ na mkpa. Ọ bụrụ na enwere oke na ezughị ezu, ọnụ ahịa nke ihe niile ga-agbadata. Nke a ga - enwezi mmetụta na ndị na - emepụta ihe, ebe ọ bụ na ha ga - ere ihe onwunwe na ọnụ ala. N’aka nke ha, enwere ike ịmanye ha iweta akụnụba na-efu.
N'ikwu nke ahụ, nkwekọrịta n'ọdịnihu na-enye ndị na-emepụta ohere belata egwu nke mbenata oke, ebe ha nwere ike ịgbachi - na njedebe ụgwọ nke ahịa ọdịnihu na-enye.
Ka anyị leba anya n’ihe atụ iji hichaa alụlụ ahụ:
Ka anyị were ya na ọnụahịa ọka dị ugbu a kachasị elu maka afọ 4
Nke a bara nnukwu uru. maka ndị na-emepụta ọka, ebe ha nwere ike ree ngwaahịa ha maka ọnụahịa dị elu. N'aka nke ha, ha nwere ike kpebie ịnwekwu ndị ọrụ ma mechaa mụbaa ọkwa mmepụta
N'ịghọta na ọnụahịa ọka nwere ike ịdalata n'oge ọ bụla, onye na-emepụta ihe kpebiri ịhapụ nkwekọrịta nkwekọrịta n'ọdịnihu yana ngwụcha ọnwa 12
N'ime ya, naanị otu n'ime nsonaazụ abụọ ga-ekwe omume
Nke mbu, oburu na onu ahia nke oka rida, onye na emeputa ihe gha ere ihe ha na ego di ala. Ma, ha ga-enweta ego site na nkwekọrịta ọdịnihu ha mere nke ọma
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọka ahịa ahịa na-aga n'ihu, onye na-emepụta ihe ga-enwe ike ree ngwaahịa ha na ọnụahịa dị elu karịa. Ma, ha ga-efunahụ ego site na nkwekọrịta ọdịnihu nke ha mere mkpụmkpụ.
Na mmechi, ihe atụ a dị n’elu na-egosi na agbanyeghị ihe ga - eme uru ọka n’ọdịnihu na ọnwa iri na abụọ na - esote, onye ọrụ ugbo ahụ ga - enwe ike ịgbachi ọnụego ugbu a. N’ezie, a ga-enwe ụgwọ a ga-akwụnye n’ozi.
Ọdịnihu ahia na Nhọrọ
A na - enwekarị nghọtahie na ọdịnihu na nhọrọ bụ otu ihe. N'otu aka, ma ego ego na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọdịnihu ọnụahịa nke akụ. N'otu aka ahụ, ha abụọ na-enye gị ohere ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ. Agbanyeghị, isi ihe dị iche dị na ọrụ nke ịzụta ihe kpatara akụ na njedebe.
N'ihe banyere nhọrọ, onye na-etinye ego nwere 'ikike', mana ọ bụghị ọrụ ịzụta akụ ahụ ozugbo nkwekọrịta ya gwụ. Kama nke ahụ, naanị ihe ha ga-eme bụ ịkwụ ụgwọ ego dị elu, nke ha ga-efufu ma ọ bụrụ na ha megide nzụta ahụ.
N'ihe banyere ahia n'ọdịnihu, ndị na-etinye ego 'ga-azụta nkwekọrịta kpatara na njedebe. Nke a ga-adabere na ọnụahịa nke nkwekọrịta ọdịnihu, na ọnụ ọgụgụ nke nkwekọrịta ndị ị zụtara. Ma ị ritere uru ma ọ bụ na ị gaghị enweta ga-adabere na ọnụahịa mmechi nke akụ ahụ mgbe nkwekọrịta ahụ gwụrụ!
Ihe kpatara ahia n'ọdịnihu na-esiri ike maka ndị ahịa ahịa
Dika anyi choputara na ndu anyi nile, ahia ndi n’eme n’iru bu ego a na-achi achi. Nke a bụ n'ihi na achọrọ ka ị zute obere nha, nke bụ oge 6 ma ọ bụ 7. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye na Bitcoin n'ọdịnihu ahịa na CME, ị ga-azụ 5 nkwekọrịta.
Nkwekorita ọ bụla bara uru 5 Bitcoin, na-ewere ego kacha nta na 25 Bitcoin. Na a ugbu a price nke $ 9,000, nke a pụtara na ị ga-mkpa itinye ego ọ dịkarịa ala $ 225,000 iji nweta a anya na.
Nke a n'onwe ya chọrọ obere ego ruru $ 1 nde, ma ọ bụ ụgwọ ọnwa kwa afọ nke opekata mpe $ 200,000 maka afọ abụọ gara aga. Site na nke a, ị ga-ahụ na ọ ga-esiri ya ike ịbanye n'ahịa ahịa n'ọdịnihu ọ gwụla ma ị ga-agbaso njirisi ahụ e kwuru na mbụ.
Ozi ọma maka gị bụ na enwere ọrụ dị mfe n'ụdị CFDs.
Na nkenke, CFDs (nkwekọrịta-maka-iche) na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere uru ọdịnihu ga-aba uru na-enweghị ịnwe ihe kpatara ya. Kama, ahia gị dabere ma ị chere na ọnụ ahịa nke ihe onwunwe ahụ ga-arị elu ma ọ bụ ala n'ọdịnihu.
Dika akụrụngwa a na-ekwu adịghị adị, CFDs nwere ike ịgbaso ọnụ ahịa ụwa nke ọtụtụ puku akụrụngwa ego. N'ezie, ọ bụrụ n'ahịa dị - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na edebere ya ego ụlọ ọrụ, ndị CFD na-enye ohere.
Nke a pụtara na ị nwere ike ịzụ ahịa otu klaasị a na - ahụ maka ọdịnihu nke nkwekọrịta. Ma ngwaahịa ya, indices, ọnụego ọmụrụ nwa, ọla edo, mmanụ, gas, ma ọ bụ mkpuchi - ndị na-ere ahịa CFD na-enye gị ohere ịga ogologo na mkpụmkpụ na akpan owo.
Enweghị Expbọchị Mmebi
Otu uru kasịnụ ị chọrọ maka CFD karịrị nkwekọrịta ọdịnihu bụ na enweghị ụbọchị mmebi na nkwekọrịta ahụ. Kama nke ahụ, ndị CFDs na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụrụhaala na ịchọrọ ịmeghe ọnọdụ ahụ. Nke a pụtara na a naghị amanye gị idozi nkwekọrịta ahụ na ụbọchị a kapịrị ọnụ, yabụ ị ga-enwe mgbanwe nke imechi ọnọdụ ahụ yana na mgbe ịchọpụtara.
Onweghi Oke Ngo
Ọ bụ ezie na ọdịbendị ọdịnala ọdịnala na-etinyekarị nha nke pere mpe karịa ọnụọgụ 6, nke a abụghị ikpe na CFDs. N'ezie, ị nwere ike ịzụ ahịa CFDs na njikwa akaụntụ nke naanị $ 100. Nke a dị mma maka ndị nke chọrọ ịbanye n'ọgbọ egwuregwu n'ọdịnihu, mana ịchọghị itinye nnukwu ego.
Ọdịnihu ahịa n'ụdị CFDs na-enyekwa gị ohere itinye ntinye ego. Nke a bụ ebe ị ga - eji azụmaahịa karịa ego karịa na akaụntụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị kpebiri ịga ogologo mmanụ.
Are nwere obi ike na amụma gị, yabụ ị kpebiri itinye ihe ngosi nke 10x. Na njikwa ego nke $ 200, nke a pụtara na uru ahịa gị bụ $ 2,000. Uru ọ bụla (ma ọ bụ ọghọm) ị na-akpata ga-esite na 10 ga-amụba ya.
Otu esi amalite ahia ahia nke oge a
Ọ bụrụ n ’ị na - achọ ụda ahịa n’ọdịniihu na ịchọrọ ịmalite na akaụntụ itinye ego taa, ugbu a anyị ga - egosi gị usoro ịkwesịrị iwere.
Nzọụkwụ 1: Họrọ CFD Futures Trading Site
Dịka anyị kwuru na ngalaba dị n'elu, ị ga-azụ ahịa CFD n'ọdịnihu dị ka ndị ahịa azụmaahịa. Dị ka ndị dị otú a, ọdụ ụgbọ mmiri mbụ gị ga-abụ ịchọta onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-egbo mkpa gị.
Fọdụ ihe ndị ị kwesịrị ị na-ele anya maka tupu ịbanye bụ:
Iwu: Kwesịrị iji naanị CFD onye na-ere ahịa n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ọ na-achịkwa ya site na otu ikikere. Nke a gụnyere ihe masịrị ndị FCA (UK), CySEC (Cyprus), MAS (Singapore), ma ọ bụ ASIC (Ọstrelia).
Akụ ndị a pụrụ ịdabere na ya: Wepụta oge tụleghachi ebe a na-ere ahịa na ore ịhụ ihe akụ ị pụrụ ịzụta na-ere. Klas ndị a ma ama nke ị nwere ike ịzụ ahịa n'ọdịnihu CFD bụ ngwaahịa, indices, na ebuka.
Ụzọ ịkwụ ụgwọ: Will ga-azụ ahịa CFD n'ọdịnihu na ego ụwa, yabụ jide n'aka na onye na-ere ahịa na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ ịchọrọ. Zọ kachasị mfe iji nweta ego n'ime usoro azụmaahịa bụ site na debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Gwọ na isslọrụ: Ga-akwụ ụgwọ ego mgbe ị na-azụ ọdịnihu CFD, yabụ kpachara anya iji nyochaa usoro ọnụahịa nke onye na-ere ahịa tupu ịbanye.
Nkwado Ndị Ahịa: N'ikpeazụ, chọpụta ihe ọwa nkwado na-akwado (dị ka nkata ndụ) yana awa ole ndị ọrụ ahịa na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ahịa na onwe gị, anyị edepụtarala nyiwe ọdịnihu nke ise CFD n'ihu njedebe nke ibe a.
Dị ka ị ga-eji a achịkwa ego n'elu ikpo okwu, na ore ahia ga-iwu chọrọ iji nyochaa njirimara gị.
Iji mee ka bọọlụ ahụ mepee, mepee akaụntụ site na itinye ozi ndị a:
A ga-ajụzi gị ka ị bulite ụdị ID. Nke a nwere ike ịbụ paspọtụ, ikike ịnya ụgbọ ala, ma ọ bụ kaadị ID nke ndị gọọmentị nyere.
Nzọụkwụ 3: Nye Akaụntụ Gị Maka Ọdịnihu Gị
Ugbu a ị ga-etinye ego n'ime akaụntụ azụmaahịa CFD ọhụrụ mepụtara.
Nkwado ụzọ ịkwụ ụgwọ na-agụnyekarị:
Kwụpụ 4: Debe Azụmaahịa
Ozugbo enwetara nkwụnye ego gị - nke na-abụkarị ozugbo, ịnwere ike itinye azụmaahịa CFD gị n'ọdịnihu n'ọdịnihu.
Chọọ akụrụngwa ịchọrọ ịzụ (mmanụ, ọla edo, ọka wit, wdg)
Kpebiri ma ị chọrọ ịga ogologo (ịzụta iji) ma ọ bụ obere (ere iji)
Tinye osisi gị
Ọ bụrụ na ọdabara - kọwaa ọnụọgụ ego ịchọrọ itinye
Dezie usoro nkwụsị-ọnwụ
Dezie usoro iji nweta ego
Kwenye na iji
N'adịghị ka nkwekọrịta ọdịnala ọdịnala, CFDs anaghị agwụ. Nke a pụtara na ị nwere ike ịpụ ọnọdụ gị oge ọ bụla masịrị gị. Ọ bụrụ n ’imepe iwu iji zụrụ ahịa mepee, mgbe ahụ debe usoro ọ ga-ere iji mechie azụmaahịa - na visa-ntụgharị.
Havenweghi oge ichoputa oge ahia ahia nke onwe gi? Ọ bụrụ otu a, n'okpuru ebe a, ị ga - ahụ ndị ọrụ ahia kacha mma kacha mma nke 2021.
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ ga-akacha mma ịrapara na ikpo okwu enyi na enyi dịka eToro. Onye na-ere ahia na-enye ọtụtụ puku akụrụngwa ego - ha niile nwere ike iji ya mepụta ya. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
Nke a gụnyere ihe niile sitere na ebuka, indices, mmasị ọnụego, agbụ, na cryptocurrencies. Nwere ike itinye ego na kaadị debit / kaadị, akaụntụ akụ, ma ọ bụ obere akpa. Ga-achọ izute opekempe $ 200. Ihe ntinye ego ga-adaba na ESMA, nke pụtara na ị ga-abanye na 30: 1 belụsọ ma ị bụ onye ahịa ọkachamara.
Na nchịkọta, ịzụ ahịa n'ọdịnihu bụ nnukwu ụzọ iji nweta akụ siri ike dịka ọla edo, mmanụ, na ọka wit - na-enweghị mkpa iburu onye nwe ya ozugbo. Kama, naanị ihe ị ga-eme bụ ịkọ nkọ ma ị chere na ọnụ ahịa ihe a ga-arị elu ma ọ bụ daa mgbe nkwekọrịta ahụ ga-agwụ.
N'ikwu nke a, ọdịnihu ọdịnala ọdịnala ọdịnala bụ naanị maka ego ụlọ ọrụ. Nke a bụ n'ihi na opekempe ọtụtụ nha na-abụkarị ihe karịrị $ 100,000. Dịka, nhọrọ kachasị mma gị bụ ịzụ ahịa n'ọdịnihu site na CFDs.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite taa, anyị ga-atụ aro iji otu n'ime ndị na-ere ahịa pre-vetted anyị tụlere na ibe a.
Kedu ahịa ndị na-eme n'ọdịnihu na-agbaso?
Usoro nkwekọrịta n'ọdịnihu ga-esochi klaasị ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche - ọ bụrụhaala na ọ ga-abụ ọrịre ahịa ụwa.
Kedu ka esi agbakọ uru na futures tradg?
Uru gị dabere na ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa nke nkwekọrịta n'ọdịnihu, yana nke akụ a na-enyocha mgbe nkwekọrịta ahụ gwụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịzụrụ ọdịnihu na mmanụ na $ 25 wee ree nkwekọrịta ahụ mgbe ọnụ ahịa mmanụ dị $ 40, ị ga-eme $ 15 maka nkwekọrịta ọ bụla. Mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ ịbawanye uru $ 15 gị site na ọnụọgụ nke nkwekọrịta ị jidere.
Nwere ike ịzụ ahịa n'ọdịnihu na leverage
Nwere ike, mana ị ga-azụ ahịa n'ọdịnihu nke ndị CFD na-anọchite anya ya.
Ọ dị m mkpa iji nnyefe anụ ahụ nke ngwaahịa mgbe ị na-azụ ahịa n'ọdịnihu?
Naanị ma ọ bụrụ na itinyela ego na nkwekọrịta ọdịnihu nke edoziri na akụ ọ na-esochi, ma ọ bụghị ego. Contractsdị nkwekọrịta ọdịnihu a na-azụkarị naanị ndị na-emepụta ihe nke ihe onwunwe dị ka ụdị mkpuchi.
Kedu ego opekata mpe mgbe ị na-azụ ahịa n'ọdịnihu?
N'ọdịnala ọdịnala ọdịniihu, ọnụọgụ kachasị nha bụkarị ọnụọgụ 6 ma ọ bụ 7. Ma, ọ bụrụ na ị kpebie ịzụ ahịa ọdịnihu nke CFD, ị nwere ike iji azụmaahịa naanị $ 100 zụọ ahịa.
Onye na-ekpebi ego nke nkwekọrịta ọdịnihu?
Dị ka ọtụtụ klas ịnyịnya ibu, ndị ahịa na-ekpebi ọnụahịa nke ọdịnihu.
Enwere m ike ịzụ ahịa n'ọdịnihu na Bitcoin dị ka ndị ahịa mkpọsa?
Ọ bụrụ n ’ime kenye gị dị ka onye na - azụ ahịa ire ere, ịgaghị enwe ike ịnweta ahịa ọdịnihu CME Bitcoin, ebe edobere nke a maka ego ụlọ ọrụ. Otú ọ dị, ị ga-enwe ike ịzụ ahịa Bitcoin CFDs - nke maka ebumnuche na ebumnuche niile, na-arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka ahịa ọdịnihu n'ọdịnihu.